ဝါရှင်တန်က အိမ်ဖြူတော်အနီးမှာ မျက်ရည်ယိုဗုံးနဲ့ ဆန္ဒပြပွဲသူတွေကို လူစုခွဲ - BBC News မြန်မာ 5
ဘီဘီစီ မြန်မာတီဗီ - ၂ ဇွန် ၂၀၂၀
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အိမ်ဖြူတော်အနီးက ဆန္ဒပြသူတွေကို မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေ သုံးပြီး လူစုခွဲခဲ့ သလို သမ္မတ ထရမ့်ကလည်း အဓိကရုဏ်းတွေကို နှိမ်နင်းဖို့ စစ်တပ်ကို သုံးမယ်လို့ ပြော
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဇွန် ၂ ရက် ည ၈ နာရီ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ကိုဗစ် ၁၉ ပိုးတွေ့သူ အသစ် ၄ ယောက်တွေ့၊ လူနာတွေဟာ ရှမ်း၊ချင်းနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းက ဖြစ်ကြပြီး ပြည်ပခရီးသွားရာဇဝင်ရှိသူက ၃ ယောက် ဖြစ်
သမိုင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် နာဆာ အာကာသယာဉ်မှူး ၂ ဦး ပုဂ္ဂလိကပိုင် စီးပွားဖြစ် အာကာသယာဉ်နဲ့ နိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်းဆီကို ရောက်သွားခဲ့ပြီ
ကိုဗစ် -19 ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေကို အနုပညာလောကမှာရော ဘယ်လို ရင်ဆိုင် ကျော်လွှားနေကြပါသလဲ
ဟောင်ကောင် အစိုးရထိပ်တန်း အရာရှိတဦးက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ လုံခြုံရေး ကိစ္စမှာ လိုတမျိုးမလိုတမျိုးနဲ့ အပြောနဲ့ အလုပ်မညီဘူးလို့ ဝေဖန်လိုက်
#မြန်မာ #အမေရိကန် #ဟောင်ကောင် #တရုတ် #ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် #အာကာသယာဉ် #အာကာသစခန်း #အနုပညာ #ဆန္ဒပြ #အသားအရောင်ခွဲခြားမှု #ဒေါ်နယ်ထရမ့်
လူ႔အခြင့္အေရးဘာလုပ္ေနလဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ေလ
Author — thetpaing soe
မြန်မာပြည်မှာတောင် နိုင်ငံသား ချင်းချင်း နိမ်နေတာလေး၊ သူများနိုင်ငံကနေဝင်ပြီး ဒီလိုအခြေနေနေရတာ ကျေးဇူးမှ မသိတတ်ကြဘဲ
Author — Puitei my
လူ႔ အခြင့္ေရး ေကာင္ေတြ
Author — Phray Reh
Now, Mr. Donald King Duck could have realize and sympathize how Hong Kong's government had felt migraine for those persisting riots in their Hong Kong country.
မ ​ကျေနပ် တာ က ​တော် ​တော် ဖျက်စီး ဆိုးသွမ်း မိုက်ရိုင်းတာ ကများ များ ခိုး ဖို့ ဖျက်စီး ဖို့ အခွင့် ​ကောင်း ​စောင့် ​နေတဲ့ ဟာ​တွေ
Author — Angel Flowers
ခြေနှစ်ချောင်း (နီဂိရိုး) ကယ်ခဲ့မိတဲ့ ဒုက္ခ
Author — YAW CHANNEL
ဆန္ဒပြတယ်လို့ မမြင်ဘူး ခိုးတာ လုတာ ဖျက်ဆီးတာ လို့ဘဲမြင်တယ်
Author — Cherry Diamond
အေမရိကန္ေတြ ျမန္မာမွာလူ႔အခြင့္အေရး ဗန္းျပေနွာက္ယွက္ေနတာေတြ အခုဝဋ္လည္ၿပီ။
Author — Ko Naing Gyi
If you afraid covid 19 you’re already dead with covid 19.
Author — Ehzeer co co
Hatred&racism are still ongoing around the world, and we believe that Trump is the first president of USA who incited hatred&racism concept to divide nation, and where black American and muslim and migrants American were targeted on the base of the policy to get popular votes from majority white American. It's very sad still today Trump is using hatred&racism politic to get majority votes in coming 2020 election
Author — ass ess
RFA နေ့စဉ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက် (၂ဝ၂ဝ ဇွန် ၃ မနက်ပိုင်း)
DVB - ဆန္ဒပြသူများကို နယူးယောက် ရဲအရာရှိများ ဒူးထောက်တောင်းပန်
ဟောင်ကောင် ဒီမိုကရေစီရေး ဆန္ဒပြပွဲ တနှစ်ပြည့် - BBC News မြန်မာ